Cinwaanka waxaa uu door muhiim ah ka qataa isgaarsiinta cilmi baarista, mana’ahan akhtiyaar (optional) cinwaanka cilmi baarista. Waa qasab in cilmi baaris kasto in ay yeelato cinwaan u gaar ah. Inta badan aaladaha casriga ah ee laga raadsho qoraalada sida Google ka iyo website yada, waxaay wax ku soo saraan erayada loo adeegsado cinwaanka. Dad badan ayaa doorashada ciwaanka cilmibaarista waxaa ay ula umuuqtaa mid iska fudud, balse waxaa uu wel wel badan ku abuura ardayga marka ugu horeyso ee uu bilaabayo cilmi baarista. Cinwaanka hagaagsani waxaa uu qayb wayn ka yahay tayada cilmi baarista, waxaa uuna micno u yeelaa guud ahaan cilmi baarista.
Cinwaanka waa waxa ugu horeeyo ee qofka aqristaha ah uu arkaayo. Waxaa loo baahan yahay in uu ahaado mid cad oo la fahmi karo. Jamacadaha qaar waxaa jiro gudi qiimeyo cinwaanada cilmi baarista, hadii ay ku qancaan cinwaanka ardayga waxaa loo ogoladaa in uu ambaqaado cilmi baarista, hadii kale dib ayaa loogu celiyaa ardayga ilaa uu kala yimaado cinwaan tayo leh oo loogu ogolado in uu cilmi baarista amaba qaado. Waxaa jiro talaaboyin farasameed la adeegsado oo maskaxda lagu haayo marka la qoraayo cinwaanka
Cinwaanku waa in uu ahaado mid fudud, kooban oo soo jiidasho leh. Hadafka kowaad ee cinwaanku waa in uu bixiyo sharaxad kooban oo ku saabsan cilmi baarista waxa ay tahay. Ka dhig cinwaankaga mid kooban oo cad. Ka fogoow faahfaahinta aan muhiimka ahayn. Cinwaanka fiican waxaa waxaa uu udhaxeeyo 8-12 eray. Waxaa mamnuuc ah in cinwaankaaga uu ka badnaado 15 eray. Hadii ciwaankaagu noqdo mid iska dheraado, aqristaha waxaa uu luminaa hadafki cinwaanka. Sidaas darteed isku day in aad soo koobto adigoon luminayn hadafka cinwaanka laga lahaa.
Isticmaal erayo ku habeen in ay wax qeexaan (Descriptive words) cinwaanka fiican waa in ay ku jiraan erayo qeexayo deebacadaha cilimi baarista. Ka fikir isticmaalida erayada dadka ay ku raadinkaraan cilmi baaristaada marka ay Google laha isticmalayaan. Ka fikir erayada muhiim ka ah ee durbaba uu soo heli karo Google ka ee la xiriiro madada aad wax ka qorayso. Hadii aadan isticmaalin erayada muhiim ka, waxaa dhacayso in aqristayaal badan aysan helin xogtaada madama ay adagtahay in Google ka uu soo qabta (key words) ka cinwaankaaga.
Cinwaanka waa waxa ugu horeyo ee lagu soo bandhigo baraha waxa lagu baaro ee lo yaqaan (online ama digital library). Ogow hadii aqristaha uu soo jiito cinwaankaaga waxaa uu go,aan sanaa in uu wada aqriyo xogtaada dhamaanteed, taasina qoraaga waxay ka saacidaysa in la soo xigto qoraaladiisa oo la iibsado waxa uu qoro.
Ka fogow in aad u isticmaasho cinwaankaaga xarfaha lasoo gaagaabiyaya iyo erayo aan la garanayn waxa ay u taagan yihiin oo dadka ku adag in ay fahmaan (Jargon). Waa loo isticmaali karaa ciwaanka xarfaha qaar oo la isla wadayaqaan sida AIDS. Marwaliba waa muhiim in ciwaanka uu bixiyo dareen soo jiidasho leh marka ugu horeysaba.
Waysocotaa la soco isbuucyada soo socdo (Continue……)
If you’re ever unsure of how to begin, register yourself here and tell us your problems.